Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2000, miorina ao amin'ny faritanin'i Shandong, izahay no mpanamboatra orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana Dibenzoylmethane (DBM) sy furfural. Amin'ny maha-famokarana matihanina lehibe indrindra an'izao tontolo izao an'i Dibenzoylmethane (DBM) manana tanjaka isan-taona 10.000 metric taonina, ho iray amin'ireo mpamokatra matihanina lehibe indrindra manerantany manana 30.000 metric taonina isan-taona. Manana orinasa mpanamboatra sampana efatra izahay.
Izy io dia orinasa 83,916 metatra toradroa misy ny atrikasa fihaonan'ny metatra toradroa 80,000. Orinasa manana mpiasa mihoatra ny 200, hery ara-teknika matanjaka, manana matihanina mirotsaka amin'ny ekipa teknika fikarohana sy fampandrosoana vaovao, ary mitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo andrimpanjakana fikarohana siantifika malaza eto an-toerana , izahay dia manaraka ny foto-kevitry ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ary fiarovana ny tontolo iainana vaovao tsy misy poizina mpanampy hafanana PVC Dipenzoylmethane (DBM) sy furaldehyde sy furfural vokatra famokarana sy ny varotra orinasa famokarana isan-taona fahaizana 40.000 taonina, ny orinasa dia izao tontolo izao mandroso teknolojia famokarana tsipika sy ny fitaovana famokarana Dibenzoylmethane (DBM) lehibe indrindra eran-tany, ny kalitaon'ny vokatra dia nahatratra ny ambaratonga avo lenta iraisam-pirenena.
Ny vokatra dia ny methanol sy asidra acetic avy amin'ny vatan-katsaka, izay ampiasaina amin'ny famokarana Dibenzoylmethane sy furfural, fampiasana maro karazana, indrindra ho an'ny fanafody fametahana alikaola alikaola sy indostria simika tsara any amin'ny faritra. Ny vokatra voajanahary dia azo ampiasaina amin'ny famokarana fanafody, furfuryl alikaola, zava-manitra, tsiro, resins ary vokatra hafa.
Dibenzoylmethane dia ampiasaina matetika ho toy ny stabilizer plastika amin'ny mpizara tavoahangy rano, setroka fampidirana, fantsona fanodinana, sns. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 10 000 taonina isan-taona, mihoatra ny 95% ny vokatra aondrana any Etazonia, firenena eropeana, Korea Atsimo, Japon, Britain, Mexico, sns Manana mpanjifa any amin'ny firenena mihoatra ny 40. ny orinasanay dia lasa mpitarika amin'ny indostria Dibenzoylmethane sy furfural any Shina.